Ime ụlọ AP Ndị na-emepụta ihe na ndị na - ebubata ya - China ụlọ AP Factory
WL8200-X10 Ime 802.11ax Wi-Fi 6 Triple Band Enterprise AP
WL8200-X10 bụ Wi-Fi 6 nke arụmọrụ dị elu Wi-Fi AP (Access Point) nke DCN wepụtara, ọ nwere ike ịkwado 802.11ax ma nye 2.5G Ethernet uplink Njikọta. Site na arụmọrụ dị elu 6.82Gbps nweta bandwidth, WL8200-X10 na-atụ anya inwe njikọta ndị ahịa dị elu iji nyefee ahụmịhe onye ọrụ Wi-Fi ka mma. Site na ndagwurugwu nke okpukpu iri na anọ nke 14 na-ebu ụzọ, WL8200-X10 bụ ezigbo nhọrọ maka nnweta nnweta dị elu na nnukwu bandwidth dị ka ngwa AR / VR, 4K ...
WL8200-I3 (R2) Ime ụlọ 802.11ac Wave2 Triple Band Enterprise AP
DCN WL8200-I3 (R2.0) bụ nnukwu arụmọrụ nke Wi-Fi AP (Access Point), nke nwere ike ịkwado 802.11ac Wave2 wee nye Gigabit Ethernet uplink connectivity. Site na arụmọrụ bandwidth 2.9Gbps ​​dị elu, WL8200-I3 (R2.0) na-atụ anya inwe njikọta ndị ahịa dị elu iji nyefee ahụmịhe onye ọrụ Wi-Fi ka mma. Ọ na-enye ike ọrụ na atụmatụ niile dịka ntinye dị mfe, nchọpụta AC na nhazi akpaka na nhazi, ntụkwasị obi dị elu, nchekwa dị elu, na njikwa oge ...
WL8200-I2 (R2) Ime ụlọ 802.11ac Wave2 Dual Band Enterprise AP
DCN WL8200-I2 (R2.0) bụ ụlọ ọrụ arụmọrụ Wi-Fi AP. Ọ na-akwado ọkọlọtọ 802.11ac Wave2 ma na-enye Gigabit Ethernet elu njikọta. Onu ogugu enwere ike inweta ihe ruru 1167Mbps. Ọ na-enye ike ọrụ na atụmatụ niile dịka ntinye dị mfe, nchọpụta AC na nhazi akpaka na nhazi, ntụkwasị obi dị elu, nchekwa dị elu, na njikwa na ndozi oge. WL8200-I2 dị mma maka ụlọ ọrụ, gọọmentị na ile ọbịa. Akụkụ dị mkpa na Hi ...